မိန်းမကိုယ် အနံ့နံပြီး အဖြူဆင်းနေလို့ . . . – Healthy Life Journal
မိန်းမကိုယ် အနံ့နံပြီး အဖြူဆင်းနေလို့ . . .
မေး. အသက် ၆၀ ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှာ ဆိုးတဲ့အနံ့မဟုတ်ပေမယ့် အနံ့ရှိပါတယ်။ အဖြူအဖတ်လည်း နည်းနည်းနေပါတယ်။ ခါးနာခြင်း၊ ခါးကိုက်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ အဖြူဖတ်တော့ အနည်းငယ်ရှိခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anty Marie (FB)
ဖြေ. သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် အဖြူဆင်းတာ အနံ့အသက်အနည်းငယ်ရှိတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ချည်ထည်ပွပွ အတွင်းခံကိုဝတ်ဖို့ နိုင်လွန်လို ပူတဲ့အ၀တ်မျိုးရှောင်ဖို့၊ တင်းကျပ်တာတွေမ၀တ်ဖို့လိုပါတယ်။ သဘာဝအီစထရိုဂျင်ပါတဲ့ ပဲပိစပ်၊ ပဲနို့၊ ပဲပြားစစ်စစ် စတာတွေ များများစားပေးပါ။ တကယ်လို့ အဖြူဆင်းတာများရင် အနံ့အသက်ပိုလာတယ်ထင်ရင် တခြားအရည်တစ်မျိုးမျိုး ဆင်းရင်တော့ ဆေးကုသဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြပါ။
Related Items:Menstruation, smell
သုတေသနလေ့လာမှုများက သက်သေပြထားသည့် လူအများကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေသော ရနံ့ရှစ်မျိုး